Muuqaalka hawada ee beeraha ka diiwaan gashan Barnaamijka Shahaadaynta Tayada Biyaha Beeraha ee Minnesota. Xuquuqda sawirka: Waaxda Beeraha ee Minnesota
Machadka McKnight Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest waxay diiradda saartaa yaraynta qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, qiyaasta, sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ee Midwest. Sanadkii la soo dhaafay, barnaamijku waxa uu balaadhinayay taageerada xalalka cimilada ee dhulalka dabiiciga ah iyo kuwa shaqada -daaqeena, beeralayda, iyo kaymaha - kuwaas oo taageera nolosha iyo maciishadda, iyada oo la aqoonsanayo in aan u baahanahay in aan la wadaagno wakiillada dhulalkan si loo ilaaliyo meelaha qaar badan ayaa soo waca guriga.
"Laga soo bilaabo dabaylaha ba'an iyo daadadka si ay u diiwaan geliyaan mowjadaha kulaylka iyo abaarta, beeralayda ayaa la kulma khatarta isbeddelka cimilada." – TONYA ALLEN, MADAXWEYNE
"Duufaanno ba'an iyo daadad si ay u diiwaan geliyaan mowjadaha kulaylka iyo abaarta, beeralayda ayaa la kulma khatarta isbeddelka cimilada," ayuu yiri madaxweynaha McKnight Tonya Allen. "Waxaan u baahanahay inaan si degdeg ah oo nidaamsan u hawlgalno si aan ugu fududeyno beeralayda inay horumariyaan xalalka cimilada ee dhulka, taas oo ka dhigi doonta hawlahooda iyo noloshooda mid adkeysi leh iyadoo sidoo kale abuuraysa ciid caafimaad leh, biyo nadiif ah, iyo dhaqaale kobcaya."
Istaraatiijiyada dhulalka shaqada ee McKnight waxay xarun u tahay beeralayda inay yihiin hogaamiyayaasha xalalka cimilada ee wada-abuurista hababka cuntada u adkaysta cimilada. Sidee? Iyadoo la ilaalinayo meelaha dabiiciga ah sida kaymaha iyo cawska ee nuuga oo kaydiya kaarboonka, hoos u dhigida qiiqa hawada ee hawlaha beeraha, iyo kor u qaadida dhaqamada beeraha ee taageera cimilada, sida yaraynta tacabka beeraha, ka tagida hadhaaga dalagyada beeraha, beeritaanka dalagyada daboolka, kala duwan ee beerista, ku darida beeralayda. iyo isku dhafka xoolaha.
"Beeruhu waa laf-dhabarta dhaqaalaheena miyiga, iyo siddeedda gobol ee Midwest ee uu McKnight ka shaqeeyo ayaa ah 33 boqolkiiba qiiqa Maraykanka ee beeraha," ayay tiri Sarah Christiansen, maamulaha barnaamijka Cimilada iyo Tamarta Midwest. "Gobolkayaga iyo beeralaydayadu waxay u horseedi karaan qaranka iyagoo malaayiin hektar oo dhul-beereed ah gelinaya inay ka shaqeeyaan sidii xalalka cimilada, taasoo barwaaqo mustaqbalka fog ah u keenaysa Heartland."
"Gobolkayaga iyo beeralaydayadu waxay u horseedi karaan qaranka iyagoo malaayiin hektar oo dhul-beereed ah gelinaya inay ka shaqeeyaan sidii xalalka cimilada, taasoo barwaaqo mustaqbalka fog ah u keenaysa Heartland." – SARAX CRISTIAN, AGAASIMAHA BARNAAMIJKA
U taageer rubuckan Xalka Cimilada ee ku salaysan Beeralayda
Deeq-bixinteeda rubuc-labaad ee 2022, McKnight waxa uu ku abaalmariyey $575,000 xagga yoolkan iyada oo loo marayo barnaamijkeeda Cimilada iyo Tamarta Midwest. Ururada qaataha waxa ay ka caawinayaan beeralayda hirgalinta dhaqamada beeralayda ee ugu wanagsan iyo horumarinta siyaasada qaabdhismeedka sida beeralayda ay u yaraynaysaan isbedelka cimilada. Guud ahaan, McKnight waxa uu bixiyay 63 deeqo oo wadartoodu dhan tahay $15 milyan rubucii (eeg our keydka macluumaadka liiska buuxa ee deeqaha la ansixiyay).
"La-hawlgalayaasha aan soo bandhigayno rubuc-kan waxa ay ka shaqaynayaan in ay abuuraan oo ay koraan tirada beeralayda ee Minnesota iyo Iowa iyaga oo fulinaya dhaqamada beeralayda ee ku habboon cimilada si loo yareeyo qiiqa sii daaya iyo kaarboonka. Beeraleydu waxay og yihiin in hawlgallada wax soo saarka leh iyo kuwa faa'iidada leh ay si gacan-ka-taag ah ula socon karaan ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah, dhisidda ciidda caafimaadka leh, iyo ilaalinta tayada biyaha," ayuu yiri Tenzin Dolkar, sarkaalka barnaamijka Cimilada iyo Tamarta Midwest.
Beeralayda Minnesota waxaa loo aqoonsan yahay dhaqamadooda-cimilo-macaan. Xuquuqda sawirka: Waaxda Beeraha ee Minnesota
Waaxda Beeraha ee Minnesota waxay mas'uul ka tahay ilaalinta sahayda cuntada, ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah, iyo kobcinta dhaqaalaha beeraha. Deeqda $100,000 ee McKnight ee sanadka soo socda ayaa ka taageeri doonta wakaalada abuurista mashruuc cusub oo casri ah oo ku saabsan cimilada gudaha Barnaamijka Shahaadada Tayada Biyaha ee Minnesota (MAWQCP). Iyada oo loo marayo mashruuca, beeralayda waxay heli karaan ugu yaraan $1,000 sannadkii ilaa shan sano si ay u qiimeeyaan oo ay u dabaqaan dhaqamada ilaalinta cimilada ee diiradda saaraya, sida maaraynta bacriminta nitrogen iyo digada si loo yareeyo qiiqa nitrous oxide iyo methane, yaraynta beerashada, daaqa xoolaha , iyo beerista dalagyada daba-dheeraada si loo soo saaro kaarboonka. Mashruucu wuxuu sidoo kale bixin doonaa kaalmo farsamo oo mid-ka-mid ah si loo caawiyo soosaarayaasha inay qiimeeyaan xulashooyinka maaraynta sida ugu wanaagsan ee la jaan qaadaya barnaamijyada cusub ee suuqa kaarboonka.
"Sababta oo ah cimilodeenna oo isbeddelaysa, beeralayda ayaa la kulma abaaro soo noqnoqda, roobab culus, heerkul aad u sarreeya, iyo cayayaan iyo dhir aad u badan. Beeralaydu waxay ku sugan yihiin safka hore ee saamaynta isbeddelka cimilada oo hadda, iyada oo loo marayo mashruuca Climate Smart Farms, waxay door muhiim ah ka ciyaari karaan la dagaallanka iyaga iyagoo fulinaya dhaqammo la xaqiijiyay oo dhisaya caafimaadka ciidda, ilaalinta kheyraadka biyaha, iyo kordhinta faa'iidada beeraha,” ayay tiri Waaxda Minnesota. Guddoomiyaha Beeraha Thom Petersen.
Jaamacadda Minnesota qaybteeda dhaqaalaha la dabaqo waxaa qaran ahaan loo aqoonsan yahay cilmi-baaristeeda, shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo waxbaridda qalin-jabinta, iyo barnaamijyada fidinta. Sannadka soo socda, oo $75,000 oo taageero ah ka helaya McKnight, waxay cilmi-baadhis ku samayn doonaan hab-dhaqanka dhaqaale ee beeralayda si ay u fahmaan caqabadaha iyo dhiirigelinta ku dhaqanka dhaqamada hagaajinaya caafimaadka ciidda oo ka dhigaya hawlgalladooda kuwo u adkeysanaya cimilada isbeddelaysa. Intaa waxaa dheer, waxay waraysan doonaan shaqaalaha Degmada ee Ilaalinta Ciidda iyo Biyaha - kuwaas oo si toos ah ula shaqeeya mulkiilayaasha si ay u hagaajiyaan oo ay u ilaaliyaan ciidda, biyaha, iyo khayraadka dabiiciga ah, iyo saamaynta tooska ah ee beeralayda hab-dhaqanka - si ay u helaan faham qoto dheer oo ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha fulinta.
"Innaga oo u guntadaynay aragtida beeralayda iyo shaqaalaha degmada ilaalinta, waxaan soo saari karnaa talooyin gaar ah oo ku saabsan sida loo hagaajiyo naqshadeynta, qaadashada, iyo waxtarka barnaamijyada gobolka sida Mashruuca Beeraha ee Climate Smart iyo, sidaas awgeed, natiijooyinka sii jirista beeraha ee dhulka," ayuu yidhi Derric Pennington, Saynisyahan Joogtaynta Sare oo ka tirsan Waaxda Dhaqaalaha Codsadaha ee Jaamacadda Minnesota.
Degmooyinka Ilaalinta ee Iowa Waxay u adeegtaa sidii hal cod 100 ka degmo ee Iowa Ciidda iyo Degmooyinka Ilaalinta Biyaha (SWCDs) si ay u taageeraan dadaallada maxalliga ah iyo horumarinta yoolalka gobolka ee kheyraadka dabiiciga ah. Waxay ogyihiin in badan oo beeralayda Iowa ah ay ka warqabaan faa'iidooyinka dhaqamada ay ka mid yihiin isticmaalka dalag-la'aanta iyo daboolida laakiin ay ka caga jiidayaan inay tijaabiyaan, iyagoo ka baqaya in ay ku guuldareystaan dalagyadooda sannadlaha ah waxayna la kulmaan cadaadis asaag ah oo uga yimaada beeralayda kale kuwaas oo aan aaminsanayn dhaqamadan. faa'iido yeelan kartaa. Si looga gudbo caqabadahaas, McKnight wuxuu siiyay Degmooyinka Ilaalinta ee Iowa $100,000 sanadka soo socda si uu u tijaabiyo barnaamij latalin ah soosaarayaasha si ay wax uga bartaan hababka beeraha ee xariifnimada leh iyo in ay qaataan dhaqamada ilaalinta dhulkooda -waxbarashada iyo abaabulka beeralayda si ay u hogaamiyaan cimilada.
"Waxaan dooneynaa inaan abuurno dhaqdhaqaaq qaran, oo ka bilaabma halkan Iowa, oo ku wajahan suuqa-aqoonsan iyo dhaqamada dib-u-dhaqaajinta ee suuqa abaal-marinta si loo taageero dhimista kaarboonka ee beeraha," ayuu yiri John Whitaker, Agaasimaha Fulinta ee Ilaalinta Degmooyinka Iowa.
Beerta Midwest waxay isku daraysaa hadhaaga dalagga, xoolaha, iyo tamarta la cusboonaysiin karo. Xuquuqda sawirka: Waaxda Beeraha ee Minnesota
Ku dhisidda Shaqada Beeraha ee McKnight ee Dadka iyo Meeraha
Mashaariicdan muhiimka ah waa sawir ka mid ah dadaallada hadda McKnight ee horumarinta xalalka cimilada ee dhulalka dabiiciga ah iyo kuwa shaqeeya ee Midwest, waxaana hadda bilaabeynaa inaan qodno. Iyadoo shaqadani ay noqon karto mid ku cusub barnaamijka Cimilada, kuma cusba McKnight . Iyadoo loo marayo our Barnaamij caalami ah Waxaan taageernaa cilmi-baarista beeralayda-cudud-dhexaadka ah ee 10 degmo ee Koonfurta Ameerika iyo Afrika si loo gaaro nidaam cunto oo siman oo waara marka loo eego gaajada caalamiga ah iyo isbeddelka cimilada. Intaa waxaa dheer, McKnight waxa uu maalgeliyey shaqada tayada ciidda iyo biyaha ku dhawaad soddon sano iyada oo loo marayo kii hore Barnaamijka River Mississippi.
Haddii aad xiisaynayso inaad wax badan ka ogaato mawduucan, sahamiso a taxane ka St. Cloud Times ku saabsan sida beeralayda ay u horseedaan xalalka cimilada, iyo sidoo kale Shaqada Goobta iyo Beerta Kulul podcasts.
Soo dhawaynta Xubnaha Shaqaalaha Cusub
Saddexdan xubnood, waxaanu ku soo dhawaynay xafiiska madaxweynaha laba xubnood oo cusub. Anagoo ah madaxa cusub ee shaqaalaha, Cedrick Baker waxay toosin doontaa shaqada heerka ganacsiga si aan u horumarino himiladeena. Tamara Wallace ku biiray McKnight oo ah kaaliyaha fulinta Tonya Allen wuxuuna bixiyaa hogaaminta maamulka ee dhammaan arrimaha khuseeya madaxweynaha.
Waxaan sidoo kale soo dhaweynay xisaabiyeyaasha cusub Jamaal Abuukar iyo Justin O'Carrick, maamulayaasha kooxda barnaamijka Pono Asuncion iyo Brew Davis, maalgelinta kaaliyaha maamulka Heidi Lundgren, adeegyada martida iyo la-xidhiidhka maamulka David Schlosseriyo Injineer Nidaamyada IT-ga Seth Gagnon.
Waxaan u dabaaldegeynaa Na Eng, oo ahaa madaxa isgaarsiinta ee McKnight muddo toddoba sano ah. Abril 22, waxaanu ku sii sagootinnay si diiran, waxaana u rajaynayna sida ugu wanagsan inta ay sii wada isticmaalka isgaadhsiinta istaraatiijiga ah oo ah qalab awood u leh saamaynta bulshada ee People for the American Way.
McKnight wuxuu hadda aqbalayaa codsiyada shaqada ee Agaasimaha Isgaarsiinta, iyo sidoo kale Sarkaalka Barnaamijka Cimilada & Tamarta Midwest iyo Sarkaalka Sare ee Barnaamijka. Wax badan baro oo codso.